China DCME All-in-one Gateway fekitari uye bhizimisi | Yunke
DCME Yese-mu-imwe Gedhi
DCME chizvarwa chitsva cheyakakwira -kuita chengetedzo gedhi uchishandisa yakawanda-musimboti yepamusoro-yekuita processor, inosanganiswa neakazvitsaurira ASIC chipset. Iine yepamusoro yekuita uye ine simba yekugadzirisa dhata kugona, DCME inoshanda kuburikidza newaya-yekumhanyisa kubudikidza uye indasitiri-inotungamira nhamba yekubatanidza nyowani ichienzaniswa neyechinyakare firewall uye Broadband router. DCME inosanganisa Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo, isina waya controller uye nyore ...
DCME chizvarwa chitsva cheyakakwira -kuita chengetedzo gedhi uchishandisa yakawanda-musimboti yepamusoro-yekuita processor, inosanganiswa neakazvitsaurira ASIC chipset. Iine yepamusoro yekuita uye ine simba yekugadzirisa dhata kugona, DCME inoshanda kuburikidza newaya-yekumhanyisa kubudikidza uye indasitiri-inotungamira nhamba yekubatanidza nyowani ichienzaniswa neyechinyakare firewall uye Broadband router. DCME inosanganisa Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo, isina waya controller uye nyore kugadzirisa. Iyo yakanakira emabhizinesi madiki nepakati, zvikoro, hurumende, zvitoro zvemaketani, zviri pakati nepakati maresitoreti eInternet, vanoshanda uye imwe netiweki yakaoma.
Kuita kwakasimba pasi peapuratidziro epamberi yemahara
DCME yakawanda-musimboti yekuchengetedza gedhi inoshandisa akawanda-epakati processor, yakazvipira ASIC yekumhanya-mhanya switching injini ichiita iyo yese Hardware chikuva kumhanya pane yakakwira-inomhanya Ethernet kuvaka. Iyi yepamusoro-yekuita dhizaini inoita kuti muchina uberekwe neakakwira ekugadzirisa mashandiro uye inopa vimbiso yekudzika kwekutsvaga kwedata traffic kuumba uye kugadzikana kushanda kwechengetedzo uye dziviriro, firewall / VPN, IPv6, uye imwe yakapfuma yepamusoro layer software inoshanda.
Kururamisa kuyerera kudzora uye maitiro maitiro
DCME inopa chaiyo kuyerera kudzora marongero anoenderana nemaapplication, IP kero, vanyoreri, maprotocol, nezvimwe, uye kumisikidza yakakwira, shoma, yakavimbiswa bandwidth pane uplink uye pasi. Zvinopfuura mazana maviri protocols zvinogona kuzivikanwa kuburikidza neDCME yekumisikidza bandwidth garandi, bandwidth kutonga kunoenderana neyakajekeswa protocol. Neiyo chaiyo NAT chikamu muganho, kutyisidzirwa kwenhamba yepamusoro chikamu kunokonzerwa nemazhinji-maitiro ekurodha-maturusi uye kurwisa kwehutachiona.
Akapfuma firewall mabasa
DCME ine simba rinorwisa-kurwisa kugona. Iine huwandu hwakawanda uye kuongororwa kwakaringana pamapakeji akasiyana akadai seARP, IP, ICMP, TCP, UDP, uye mamwe marudzi emapakeji, kurwiswa kunogona kuwanikwa nekuvharwa kusanganisira SYN Mafashama, DDoS, IP kurongedza kupatsanura kurwisa, IP kero yekuongorora kurwisa, nezvimwe Uye ruzivo rwemaaramu runogona kupihwa kuitira kuti hutarisiro hwako hwepamhepo huve hwakachengeteka.Kuenderana nehunyanzvi hwenyika hwekuona tekinoroji, DCME inopa yakasimba anti-ARP ARP nzira dzinosanganisira IP + MAC inosunga, ARP scanning tekinoroji, yakavimbika ARP-kudzidza, ARP-kusefa. IP / MAC kusunga uye anti-anti-ARP mashandiro pakati pevatengi nemidziyo zvinogona kuitwa otomatiki.
Iyo yakanyatsobatanidzwa yekuwana controller
DCME yekuchengetedza gedhi inogona kushandiswa seye yekuwana controller kumisikidza isina waya netiweki neDCN AP zvishandiso. Zvichienderana nehungwaru manejimendi sumbu tekinoroji, DCME inogona kuongorora RF kukosha munzvimbo yeumwe neumwe AP uye kugadzirisa simba remasaini uye chiteshi cheiyo AP yega otomatiki zvinoenderana nenhamba yemushandisi kana mutoro wehuremu. Panguva imwecheteyo, inogona kudzikisira kupindirana kwemasaini asina waya kuti ione mutoro wehuremu uye kugadzikana kweiyo isina waya network uye nekupa mhinduro kwayo yepakati / diki isina waya netiweki nematavi ebhizinesi hombe.
Inoshanda uye yakapusa manejimendi uye kugadzirisa
DCME yekuchengetedza gedhi inotora yakazara graphic manejimendi Webhu peji. Matanho matatu chete anodiwa kuti ubatanidze DCME kunetiweki neiyo yekugadzirisa wizard.
Matanho akasiyana ekutarisa, kusanganisira kuita kwekutarisa, kutadza kuvhundutsa, yambiro yehutachiona / yekurwisa, nezvimwe, uye manhamba uye ruzivo rwehuwandu maererano nebandwidth uye chikamu zvinotsigirwa kune manejimendi nekugadzirisa zviri nyore.
1 RS-232 (RJ-45) koni, 2 USB2.0 chiteshi
Simba / system Kumhanya / chiteshi chinzvimbo
Inoshanda 0 ℃ -40 ℃
Kuchengetedza -20 ℃ -65 ℃
Inoshanda 10% -85% Isingabvumidze
Kuchengetedza 5% -95% Isingabvumidze
Vashandisi veMamwechete vashandisi
Yakakurudzirwa Export Bandwidth
Chikamu chitsva pasekondi
Max panguva imwe chete
Max IPSec chiteshi
Max L2TP vanoshandisa vashandisi
Max SSL VPN vanoshandisa vashandisi
Max Web kusimbisa vashandisi
Wi-Fi Pinda Mutungamiriri
Zvisizvo zvinogoneka APs
Maximum inogoneka APs
Kugadzirira / NAT / Bridge
Network PPPoE mutengi, PPPoE chap / pap / chero nzira nhatu dzechokwadi, PPPoE mutengi kubatanidzwazve
DHCP Server, Mutengi, relay
Static routing, static routing ine pekutanga, RIP
PBR (yakavakirwa pakero kero, sosi chiteshi, kero yekuenda, protocol, uye mamwe maitiro), tsigira inotevera-hop IP kana interface
Yakaenzana mizhinji-nzira mutoro kuenzanisa, uye bandwidth mutoro unozvigadzirisa wega chikamu cheimwe nzira, kuti uwane mutoro kuenzanisa zvichienderana netambo.
Multilink backup basa, kuronga mamiriro ekuonekwa kwenyika, uye otomatiki switching uye kumashure pakati pezvisungo
Kunobva NAT Static / Dynamic
1: 1 NAT1: N NATN: N NATServer Mutoro Kuenzanisa
Yakawanda-protocol NAT ALG
Yakadzika packet kuongorora
Kudzora uye chiyero-muganho pane Yakakurumbira P2P kunyorera kusanganisira BT, eMule, eDonkey
Kudzora uye chiyero-muganho pane anozivikanwa IM kunyorera kusanganisira Yahoo, GTalk, nezvimwe.
URL yekusefa, QQ odhita
IP-yakavakirwa bandwidth kutonga
Kushanda-based bandwidth control
Inoyerera-yakavakirwa bandwidth kutonga
Bandwidth garandi, bandwidth kuchengetedza, inoshanduka bandwidth kugoverwa
2 mazinga ebandwidth control (IP uye application bandwidth control, port-based)
ARP kurwisa nzira dzekudzivirira (arp kudzidza, yemahara arp, arp kudzivirira)
IP-MAC inosunga, manyore uye otomatiki
DoS, DDoS kurwisa kudzivirirwa
Kudzivirirwa kwemafashama: mafashama eICMP, mafashama eDP, mafashama eSYN
DNS mibvunzo mafashamo kudzivirirwa: DNS mibvunzo & DNS inodzokorora query mafashama ekurwisa kudzivirirwa
Kudzivirirwa kwepaketi kudzivirirwa
IP anomaly kuona, TCP anomaly kuona
IP kero kushanda pakuvheneka kudzivirira kudzivirira, chiteshi tarisa kuchengetedzwa
Kuramba Kwebasa Kudzivirirwa: Ping yeRufu, Teardrop, IP kupatsanurwa, IP sarudzo, Smurf kana Fraggle, Nyika, ICMP hombe packet
zvinoenderana nechinongedzo, sosi IP, IP yekuenda, uye mashandisiro (zvikamu zvitsva pasekondi uye nhamba yezvikamu zvakafanana)
Nguva yekutonga kudzora
Wi-Fi manejimendi, kumisikidza, kuongorora
Firmware kusimudzira kuburikidza neWEB uye TFTP
Kugadziridza kuchengetedza uye kudzorera
Webhu yekugadzirisa wizard
Chinongedzo manejimendi zvinoenderana neIP kero, mapuroteni, chirongwa, uye chinongedzo
Log uye wongorora manhamba
Kuongorora uye huwandu pane interface traffic
Kuongorora uye huwandu pane IP traffic
Kuongorora uye manhamba pane chikamu chikamu zvichienderana neIP kero
Kuongorora uye huwandu pane bandwidth uye chikamu chikamu zvichienderana nemaapplication
Kuongorora uye huwandu pane huwandu hwekurwiswa
Kuongorora uye huwandu paIP, kunyorera, uye kurwiswa kunoenderana ne Kuchengeteka domain
Chiitiko cherogi / traffic log / yekumisikidza danda / yearamu danda / yekuchengetedza danda
USB nerogi negadziriro yeparutivi
Kuvimbika kwakakwirira Tsigiro yekubatanidza mutoro kuenzanisa, chinongedzo backup
Multiple link kutadza kuona mashandiro
Chaicho Chikumbiro 1: Export Gateway, inosanganisa mashandiro e Broadband router, firewall, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo.
Chaicho Chikumbiro 2: Vaka VPN Kubatana pakati pedzimbahwe nemapazi
DCME-320-L DCME-320-L yakabatanidzwa gedhi, ine maficha e Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic management uye control, network chengetedzo, isina waya controller, ine chiteshi che8 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. default ne2 mauniti AP rezinesi, rutsigiro rwekudzora max. 32 maAP, ratidza huwandu hwevashandisi mazana matatu.
DCME-320 (R2) DCME-320 (R2) yakabatana gedhi, ine maficha e Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo, isina waya controller, ine chiteshi che8 * 10/100 / 1000M Base-T, 2 * 1000M Combo , 1 * Console, 2 * USB2.0. default neana4 mayunitsi AP rezinesi, rutsigiro kudzora max. 64 APs, inoratidzira huwandu hwevashandisi mazana mashanu.
DCME-520 -L DCME-520-L inosanganisa gedhi, iine maficha e Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo, isina waya controller, ine chiteshi che6 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. default ne6 mauniti AP rezinesi, rutsigiro rwekudzora max. 256 APs, inoratidzira huwandu hwevashandisi ve1000-1200.
DCME-520 DCME-520 inosanganisa gedhi, iine maficha e Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic management uye control, network chengetedzo, isina waya controller, ine chiteshi che9 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Console, 2 * USB2.0. default ne12 mayuniti AP rezinesi, rutsigiro rwekudzora max. 512 APs, ratidza huwandu hwevashandisi 2000.
DCME-720 DCME-720 inobatanidza gedhi, iine maficha e Broadband router, firewall, switch, VPN, traffic manejimendi uye kutonga, network chengetedzo, isina waya controller, ine chiteshi che17 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Console, 2 * USB2.0. Taura huwandu hwevashandisi mazana mashanu.
DCME-AC-10 AP manejimendi kusimudzira rezinesi (rezinesi re10 APs)